Vaovao - Iza amin'ireo no milina poloney mety aminao
Iza amin'ireo no milina poloney mety aminao
Iza amin'ireo no milina poloney mety aminao?
Amin'izao fotoana izao, be dia be ny marika milina fandefasana poloney eny an-tsena, saingy azo zaraina ho karazany telo izy ireo amin'ny ankapobeny, dia ny poloney rotary, ny polisera mihetsika roa ary ny rotation da polisher.
Ny poloney rotary dia milina poloney izay tsy mampiasa afa-tsy karazana fihetsehana 1 mba hamoronana vokatra poloney. Tena tsara ny manapaka, miasa haingana, nefa koa mila traikefa sy fahalalana bebe kokoa hampiasaina tsara.
Poloney mihetsika roa hetsi-panoherana dia mampiasa fihetsiketsehana boribory miampy fihetsika mihodinkodina mba hamoronana hetsika roa sosona. Ilaina ity mihetsika ity rehefa manazava ny masinina amin'ny alàlan'ny milina. Ny polera amin'ny hetsika roa dia malaza noho izy mora miasa, ka mahatonga azy io ho an'ny vao manomboka.
Ny polisera fihodinana an-tery dia ny fitambaran'ireo fiasa mihodina sy mihetsika roa.
Izy io koa dia mpandefa hetsika roa, mihodina amin'ny boriborintany isan-karazany, noho izany mizara hafanana bebe kokoa amin'ny loko, ka mahatonga azy io ho azo antoka kokoa noho ny mpanodina rotary. Saingy tsy hijanona ny fihodinana na inona na inona ny herisetra ampiasanao raha ampitahaina amin'ny polisera roa-hetsika. Amin'ny ankapobeny, ny fihodinana an-tery dia manome hetsika fanapahana tsara kokoa raha oharina amin'ny DA, fa ny antsipiriany fiara azo antoka kokoa raha oharina amin'ny rotary.
Misafidiana Dual Action Polisher raha:
1.You dia vaovao amin'ny milina poloney;
2. Mila zavatra mora ampiasaina ianao;
3. Te haka tadin-javatra vitsivitsy sy gorodona kely amin'ny hosodoko ianao;
4. Ny fiarao ihany na ny fiaran'ny fianakavianao ihany no karakarainao;
5.Mitady polisera fiara azo antoka, nefa matanjaka kokoa ianao;
6. te hampiasa azy io tsy tapaka mba hitazonana ny hosodoko;
7. Te-hanomboka orinasa antsipirihany antsipiriany na antsipirihany amin'ny antsipiriany ianao;
8. Ianao dia mitady fitaovana hiantohana ny famaranana tsy misy tadio;
9. Ireo tompon-tsambo / RV na fiaramanidina dia mitady fomba tsara kokoa, haingana kokoa, ary azo antoka kokoa hitazonana ny sambony / RV / fiaramanidina.
Misafidiana fihodinana an-keriny DA Polisher raha:
1.Mitady polisera azo antoka ianao nefa mahery kokoa;
2.You dia vaovao amin'ny milina poloney fa afaka mianatra haingana;
3.You efa nampiasa mpanao polisaina hetsika roa ary vonona amin'ny dingana manaraka;
4. Tianao ny vokatra azo avy amin'ny rotary miaraka amin'ny fiarovana ny DA!
Misafidiana Rotary Polisher raha:
1.Manana lesoka mavesatra amin'ny loko tena tianao esorina ianao;
2.You dia manana fotoana kely hizahana ny fomba fiasan'ilay masinina;
3.Manana orinasa amin'ny antsipiriany ianao izay te hanampy fitaovana matanjaka kokoa;
4. te ho tonga antsipirihany matihanina ianao;
5.You dia mpankafy iray izay nahafehy ny iray na maromaro amin'ireo vondrona fitaovana hafa ary vonona ny hiroso amin'ny poloney rotary.
Fotoana fandefasana: Sep-16-2020